Spocket: Tanga uye Seamless Batanidza Bhizinesi Rinodonhedza Neyako Ecommerce Platform | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 26, 2021 Chishanu, Mbudzi 26, 2021 Douglas Karr
Semuparidzi wemukati, kusiyanisa mari yako yekuwana kwakakosha zvakanyanya. Kwataiva nenhepfenyuro mikuru mikuru makumi emakore apfuura uye kushambadzira kwaibatsira, nhasi tine zviuru zvezvinobudisa nhau uye vagadziri vezvemukati kwese kwese. Hapana mubvunzo kuti wakaona vashambadziri-vanoshambadzira vanofanirwa kuderedza vashandi mumakore apfuura… uye avo vari kurarama vari kutarisa kune dzimwe nzvimbo kuti vagadzire mari. Izvi zvinogona kunge zviri zvekutsigira, kunyora mabhuku, kuita hurukuro, kuita misangano inobhadharwa, nekugadzira makosi.
Rukova rwusingatarisirwe rwuri kutanga chitoro chepamhepo chine zvigadzirwa zvinoenderana. Kuve nepodcast, semuenzaniso, iri kusimuka inogona kutsigirwa neheti, t-shirts, uye zvimwe zvinotengeswa. Nekudaro, kubata hesiti, kurongedza, uye kutumira imusoro musoro waungangove usina nguva. Ndiko uko dropshipping iri mhinduro yakakwana.
Chii chiri kudonhedza uye chinoshanda sei?
Mutengi anoisa odha muchitoro chako uye anokubhadhara iyo X mari. Mutengesi (iwe) unozoda kutenga icho chigadzirwa cheiyo Y huwandu kubva kumutengesi, uye ivo vanozotumira chinhu chacho zvakananga kumutengi wako. Profit yako yakaenzana ne = X - Y. Iyo dropshipping modhi inobvumidza iwe kuvhura online chitoro pasina kutakura chero inventory zvachose.
Spocket: Bhurawuza Zvigadzirwa Zvinotengeswa Zvakanakisa Kubva Kune Vakavimbika Vatengesi
Isu Yakanyorwa pamusoro Kudhindwa, mutengesi wekudonhedza munguva yakapfuura, uyo ane simba pamusika. Yakadhindwa inopa kugona kugadzirisa uye kushambadza mabranded kana akagadzirwa mhinduro. Spocket zvakasiyana pakuti hauna branding kana customization zvikwanisiro… inzvimbo yemusika yezvigadzirwa zvakaratidzwa zvinototengeswa zvakanaka.
Spocket yakasarudzika nekuti haingori mutengesi mumwe chete… muunganidzwa wezviuru zvezvinotengeswa zvakanyanya kudonhedza zvigadzirwa kubva kune vanovimbika, vemhando yepamusoro vatengesi. Vane musanganiswa wezvigadzirwa kubva kuU.SA, EU uye pasi rose, saka unozokwanisa kukwezva kumisika mizhinji - pasi rese.
Musika wavo unobvumidza iwe kutsvaga uye kuronga nekutumira sosi, kukurumidza kwekutumira, isingadhure yekutumira, hesera, mutengo, kukosha, uye chikamu:
Mapoka arikuitika anosanganisira zvipfeko zvevakadzi, zvishongo newachi, zvekushandisa zvechipfuyo, zvekugezera uye runako, tech accessories, pamba nebindu zvekushandisa, vana uye zvevacheche, matoyi, shangu, zvishongedzo zvepati, nezvimwe. Zvimiro zvinosanganisira:
Samples: Rodha kubva padashboard nekudzvanya zvishoma. Edza zviri nyore zvigadzirwa uye vatengesi kuti vavake bhizinesi rakavimbika rekudonhedza.
Fast-Shipping: 90% yevashambadziri veSpcoket vari muUS neEurope.
Ita Pfuma ine Utano: Spocket inokupa iwe 30% - 60% kuderedzwa kubva pamitengo yenguva dzose yekutengesa.
100% Automated Order Processing: Zvese zvaunofanirwa kuita kudzvanya bhatani rekubuda, uye ivo vanochengeta zvimwe. Ivo vanogadzira maodha uye vanoatumira kune vatengi vako.
Branded Invoicing: Vazhinji vatengesi paSpocket vanokubvumidza kuti uwedzere yako logo uye yakasarudzika noti kune invoice yemutengi wako.
24 / 7 Support: Unogona kutumira meseji chero nguva yezuva, uye takagadzirira kupindura mibvunzo yako.
Spocket zvakare ine imwe yenharaunda huru dzevanodonhedza kudzidza kubva mberi Facebook!
Spocket inopa isina musono kusanganisa ne BigCommerce, Shopify, Felex, Wix, Ecwid, squarespace, WooCommerce, Square, Alibaba, AliScraper, uye KMO Shops.
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Spocket uye ndiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo mukati meichi chinyorwa.
Tags: AlibabaAliScraperBigCommercedropshipping kubatanidzwachitoro chakadonhakudonhedza vatengesiEcwidFacebook bokaFelexMerchandisepaIndaneti chitoroshopifysquaresquarespacevatengesiwixwoocommerce
Mafonisaiti: Gadzira Kutengesa Funnel Mawebhusaiti uye Kumisikidza Mapeji muMaminiti Uchishandisa Runhare Rwako